Toromarika momba ny fitomboan'ny kristiana voajanahary
Ity dia lisitry ny tetikasa kristaly miloko. Ireo loko kristaly ireo dia voajanahary, tsy vokatry ny famafazana sakafo na fanampiny fanampiny. Afaka maniry kristaly voajanahary amin'ny loko feno tarehy ianao!
Purple - Aluminium Crystals
Ity dia kiran'ny ala chrome, fantatra koa hoe alom-chromium. Ny kristaly dia maneho ny loko volomparasy sy ny endrika octohedral. Ra'ike, Wikipedia Commons
Ireo kristaly ireo dia felam-pasika lalina raha mampiasa alimônera madio ianao . Raha mampifangaro ny alaola amin'ny alom-borona ianao dia afaka mahazo kristaly lavanty . Ity dia karazana kristaly mahavariana izay mora hitombo. Bebe kokoa "
Blue - Crystals Copper Sulphate
Copper Sulphate Copper. Stephanb, wikipedia.org
Olona maro no mahita izany fa ny vatosoa tena tsara indrindra azonao ampiasaina. Ity kristaly ity dia mora ihany koa ny mitombo. Azonao atao ny mandidy an'io chimique io na mety ho azonao amidy ho algicide ampiasaina amin'ny dobo, loharano, na lakana. Bebe kokoa "
Blue-Green - Fitrandrahana monohydrate kôpera
Io famokarana io dia mamokatra kristaly tsara manga sy maitso mena. Bebe kokoa "
Golden Yellow - Rock Candy
Raha siramamy siramamy na siramamy siramamy no ahazoanao vato vatomamy azo avy amin'ny volamena na volomparasy. Manana siramamy kokoa izy io noho ny vatomamy rock vita amin'ny siramamy fotsy. Lyzzy, Wikipedia Commons
Mihamazava ny kristaly siramamy izay mampiasa siramamy fotsy , na dia azo atao aza ny loko ampiasaina amin'ny fanangonana sakafo. Raha mampiasa siramamy na siramamy mena ianao, dia azo antoka fa volamena na volomparasy ny vatomamy vatanao. Bebe kokoa "
Orange - Potassium Dichromate Crystals
Ny dichrome potassium dia manana loko mavokavoka mamiratra. Toeram-pitsaboana mitongilana be dia be izy io, koa aza misoroka na mifoka. Mampiasà fomba fitsaboana sahaza. Ben Mills
Ny kristaly dichrome potassium dia ho loko mareva-doko maitso. Loko tsy mahazatra ho an'ny kristaly izany, koa aoka ho azo antoka fa hanome azy ezaka. Bebe kokoa "
Red - Potassium Ferricyanide kristaly
Potassium ferricyanide koa antsoina hoe Red Prussiate ao Potash. Izy io dia mamorona kristaly mena madinidinika. Ben Mills
Aza manahy ny ampahan'ny 'cyanide' amin'ny anarana. Tsy tena mampidi-doza ny chimique. Io famokarana io dia miteraka kristaly mena madinika. Bebe kokoa "
Clear - Aluminium Crystals
Ny kristaly ala dia angamba ny kristaly mora indrindra hitombo. Ny chemicalic dia tsy misy poizina ary mitombo haingana sy mihatsara ny kristaly. Anne Helmenstine
Miharihary ireo kristaly ireo. Na dia tsy manana loko mamirapiratra aza izy ireo, dia mety ho lehibe be sy amin'ny endrika tsara tarehy. Bebe kokoa "
Silver - Silver Crystals
Sarin'ny kristaly vy metaly, miaraka amina penny omena mba hampisehoana ny habeny. US Geological Survey
Ny kristaly volafotsy dia kristaly iraisana mba hitombo amin'ny fijerena mikraoskaopy na dia mety ho lehibe kokoa aza. Bebe kokoa "
White - Baking Soda Stalactites
Mora ny manamboatra ny fihanaky ny stalactites sy ny stalagmites amin'ny fampiasana fitaovana ao an-tokantrano. Anne Helmenstine
Ireo soda fotsy na bikarbonate siramamy siramamy dia natao hamolavolana ny fananganana stalactite ao anaty lava-bato. Bebe kokoa "
Glow - Aluminium Crystals fluorescent
Ireo kristaly mora aloa dia manjelanjelatra, noho ny fanampim-panafana kely misy loko kely ho an'ny vahaolana kristiana. Anne Helmenstine
Ny fanaovana kristaly izay mamirapiratra rehefa manaitra ny hazavana mainty dia mora toy ny fanaovana kristaly tsy miloko . Ny lokon'ilay glace azonao dia miankina amin'ny loko ampiasainao amin'ny vahaolana kristaly . Bebe kokoa "
Black - Borax Kristiana
Azonao atao ny mampitombo kristaly boribory amin'ny loko rehetra - na dia mainty aza! Ireo kristaly ireo dia nitombo tamin'ny fampiasana fanangonana sakafo mainty. Anne Helmenstine
Azonao atao ny manamboatra kristaly izay mainty matevina na matanjaka amin'ny alàlan'ny famokarana sakafo amin'ny mainty hoditra ho an'ny kristaly malaza borax. Bebe kokoa "
Homamiad Dippin 'Dots Azota Ice Cream Stick
Ahoana ny fomba hanamboaran-jiro mpanadio lamba
Ahoana no hanaovana ny Sulphate Copper
Ahoana ny fomba hanamboarana Crystal Geode
Ahoana no hampiroborobo ny kristaly Fructose?
Asa goavana amin'ny sehatry ny siansa
Ahoana no fanaovana Silicat Sodium na Glass Water
Volkano Recipes - Manana raozy ho an'ny volkano simika ianao
18 Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny esperanto
Lisitra (fitsipika sy fehezanteny)
"Ireo Heidi Chornicles" nataon'i Wendy Wasserstein
Ireo fikambanana 10 momba ny fiarovana ny biby fiompy
Aquarius sy Fisaraham-pitiavana Fitiavana
Torohevitra momba ny fanoratana lehibe: Fametrahana ny sehatra
Heinrich Schliemann sy ny Discovery tany Troy
Manadino ny fahoriantsika ve Andriamanitra?
Ny Bodisma sy ny Fitondran-tena
Famaritana ny Nucleophile
Ampy ve ny Tokantranonao?
Lisitry ny oniversite ho an'ny fanjakana
Inona no atao hoe Phronesis
Toe-taratasy papiamento: Magic House
Moa ve ny zanako dia mandray anjara amin'ny Occult / Satanism?
Ny Pros sy ny Tsinin'ny Sekoly Taona
Villanova GPA, SAT ary ACT Data
Mpandresy goavana amin'ny Golf
Albert Einstein momba ny Siansa, Andriamanitra ary ny Fivavahana
Ampiasao 2 Squares mba hanapahana roapolo ho an'ny kisoa 9
Randolph College GPA, SAT sy ACT Data
Takelajoro ho fanamafisana ny fitondran-tena sy fitantanana efitrano fianarana
Ny rafitra manda mandarin